Miyaad i tusi kartaa sida loo helo dib-u-tayo fiican?
Ka hor inta kale, maxay ka dhigaysaa tayada tayada? Guud ahaan, bogga internetka ama bogga xiriirka blogka waxaa lagu qiimeeyaa Google iyadoo la adeegsanayo dhowr arrimood oo asaasi ah, sida xiriirinta xiriirka, da'da domain, isku-xirka qoraalka, qaababka dabiiciga ah, iwm. Maxaad u ogaaneysaa sida loo helo tayo wanaagsan oo tayo leh? Si fudud sababtoo ah dabiiciga ah ee dib u dhisku wuxuu dhawaan noqday mid ka mid ah calaamadaha ugu muhiimsan ee SEO. Taasi waa sababta aad u ogaan lahayd meelaha saxda ah iyo ficilada saxda ah ee loo qaadayo si loogu kasbado kuwa dib-u-qiimo leh. Waxaan rabaa inaan ku tuso sida loo helo dib-u-tayada tiknoolajiyada shabakadda bulshada, suuq-geynta suuqa, war-saxaafadeed saxaafadeed,. Sidaa daraadeed, aan dib u eegno dhammaan hoosta. Iskuduwaha Bulshada
Xaqiiqo ahaan, maskaxda casriga ah ee warbaahinta bulshada waa qiimeeynta isku xirka. Waxaa jira qiyaaso daraasad oo ah shabakado bulsheed iyo goobo warbaahineed oo helay dhagaystayaasha ugu badan ee isticmaala firfircoon, sida Google Plus, Twitter, Facebook, iwm.Waxyaabahani waa in barnaamij kasta oo internetka ku caan ah ee warbaahinta bulshada sida caadiga ah uu leeyahay liis bog oo aad u sarreeya. Taasi waa sababta fursadan soo jiidasho leh lagu talinayaa in lagu tijaabiyo dhismaha xiriirka tayo leh marka hore iyo ugu horreyntii. Maskaxda ku hay in natiijooyinka ugu wanaagsan ee aad halkan ku diyaargaroobi kartid jadwalka dib u soo noqoshada ama qorshaha kanaalada warbaahinta. Sidaa oo kale, ma keli kari doontid oo keliya inaad dhageysatid dhageystayaashaaga hadda, laakiin bartilmaameedkaaga macaamiishaada waxay isticmaalaan waxyaabo gaar ah iyo mid gaar ah oo bixiya qiimaha dhabta ah, oo lagu taageeray sawirrada khuseeya, joornaalada, feylasha, iwm.
Habkani waxa uu ka mid yahay hababka ugu fiican ee lagu gaari karo istaraatiijiyada dhismaha xiriirka sare. Halkan waa sida loo helo dib-u-tayada tayada leh ee suuq-geynta - kaliya raadi keywords muhiim ah oo diyaariya mawduucyo maqaalo oo cajiib ah. Marka xigta, u bilow inaad ka shaqayso mawduucaaga si loo soo gudbiyo qaar ka mid ah tusaalayaasha maqaalka ee ugu caansan. Habkaa, ha iloobin inaad ku darto xiriiro ku tilmaamaya boggaga internetka ama blogka. Kaliya hubso in wax walba ay ku jiraan - qoraalada labadaba, iyo wadaadada wadaaga ah ee bulshada waa in si fiican loo dhigaa qoraallada tayada leh.
Website-yada noocan oo kale ah ee ka shaqeeya wargeysyada ayaa sidoo kale ah meelo waaweyn oo lagu xiro qaar ka mid ah isku xirnaanta - sababtoo ah ku dhowaad waxkasta oo la soo dhajiyay waxaa badanaa la qaataa goobo yaryar oo si ballaaran loogu faafiyo Webka. Marka la eego in goobaha warbaahinta ee waaweyni ay had iyo jeer raadinayaan gabal cusub oo cusub ama sheekooyin xiiso leh ee danaha guud ee dadweynaha, waxaad u baahan tahay inaad ku siiso maqaalka tayada leh ee mawduuca kulul leh ee ku xiran warshadahaaga muhiimka ah ama niche. Kaliya iska hubso inaad abuurto cinwaanka jaangoynta iyo waxyaabaha muhiimka ah ee soo jiidanaya dhagaystayaasha balaadhan oo ballaadhan - oo aad samaysay.
Dukumiintiyada wadaagista Shabakadaha
Tani waxay noqonaysaa qaab kale oo weyn oo ah dhisida isku xirka dabiiciga ah, ka sokow inta badan bixinta dhabarka u qalmidda ee leh astaamaha DoFollow. Waxaa intaa dheer, ilaha intooda badan ama la xidhiidha si fiican ayaa loogu kalsoon yahay makiinadaha waaweyn ee raadinta sida Google laftiisa. Sidaas, fursaddani waxay u egtahay mid xaqiiqdii ku haboon, sax ah? Halkan waxaa ah sida loo helo dib-u-tayada tayada leh ee laga helo bogaga interneetka ee wada-qaybinta - kaliya ayaa leh qaybta tayada saxda ah (i. e. , ma aha maqaallo aad u xun, ama dhajimaha dhererka dheer). Marka wax walboo la diyaariyo, waxaa kaliya oo lagaa rabaa inaad soo gudbiso iyada oo la marin doono gadaal dib u tilmaamaya jidka website-kaaga ama blog Source .